Macluumaadka cusub ee suurtogalka ah ee Apple soo saaray December 8 | Waxaan ka socdaa mac
Waa xanta fudud, laakiin waa aasaas. Apple waxay ku sameysay warbixin gudaha ah dhowr adeeg bixiyeyaal halkaasoo ay kula talinayso inay jiri doonaan "isbeddelo la xiriira AppleCare" maalinta Talaadada Diisambar 8. Meow
Tani badanaa waxay ka dhigan tahay inay jiri doonaan tixraacyo cusub oo aaladaha cusub oo leh noocyo qandaraasyo cusub ah. AppleCare. Markaa waan la socon doonnaa haddaynu weli haysanno "Hal wax kale" ka hor dhammaadka sannadka. Ma noqon doonto dhacdo, maaddaama shirkaddu mar hore ku dhawaaqi lahayd, laakiin waxaa laga yaabaa in la bilaabo "aad u hooseeya" sidii ku dhacday iPhone SE ka hor xagaaga. Waan arki doonnaa.
Apple waxay la socodsiisay dhowr adeeg bixiyeyaal inay hayso nooc ka mid ah "isbeddelada la xiriira AppleCare" ee la qorsheeyay Talaadada soo socota, 8-da Diseembar. Si cad uma cadda waxa ay tani macnaheedu noqon karto, laakiin sii dayntii hore ee la midka ahayd waxay ahayd ogeysiiska isbeddelada tixraaca qalabka cusub, dheer moodooyinka cusub iyo hooseeya ka noqoshada moodooyinka hadda jira.
MacRumors helay a qoraalka gudaha Waxaa Apple ka soo saaray "ilo lagu kalsoon yahay" oo faahfaahinaysa in farsamayaqaannada adeegga bixiya ay "u diyaargaroobaan alaabada cusub ee 'SKUs', sharaxaada alaabada cusub / la cusbooneysiiyay, iyo qiimaha wax soo saarka cusub / la cusbooneysiiyay." Siideynta ayaa sharxeysa in isbeddelada la qorsheeyay Talaadada, Diseembar 8, ugu yaraan 5:30 am Waqtiga Baasifigga.
Sida lagu sheegay warbixinta, Apple waxay soo saartay "wax u dhigma isku mid ah" adeeg bixiyeyaasha ka hor ogeysiisyadii hore ee badeecadaha. Tusaale ahaan, Apple waxay dirtay qoraal ay ugu sheekeynayso farsamayaqaannada inay u diyaargaroobaan is-beddello la mid ah Oktoobar 13 markay tahay 10-ka subaxnimo Waqtiga Baasifigga, oo ah goorta Apple ay xafladdeeda qabato iPhone 12.
Ma jiri doono dhacdo cusub ka Apple sanadkan. Cinwaanka kii ugu dambeeyay ee Noofambar ee la soo dhaafay, "Hal shay ka badan" (hal shay kale) durba wuu caddeeyay. Laakiin waa run in Apple ay soo saari karto aalad ka hor Kirismaska ​​ka hor ogeysiis la'aan, sidii dhacday gugan iyada oo la adeegsanayo iPhone SE, oo leh 'MacBook Air' ama 'iPad Pro' Waxaan sugeynaa Bakhaarka Talaadada soo socota.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Apple waxay ku dhawaaqi kartaa qalab cusub usbuuca soo socda
Fiiro gaar ah u yeelo waqtiyada dhalmada ee Mac leh M1 haddii aad u baahatid iyaga Kirismaska